Shirkadda Golis oo dhsime ka hirgalisay Garoonka diyaaradaha Bosaso. | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo dhsime ka hirgalisay Garoonka diyaaradaha Bosaso.
Shirkadda Isgaarsiinta Golis Telecom Somalia ayaa iyadoo ka jawaabaysa dalab uga yimi maamulka Gagida diyaaradaha ee Boosaaso waxay hirgalisay dhisme loogu talagalay inay ku nastaan ciidamadda amaanka iridka hore ee laga soo galo garoonka diyaaradaha iyo dadwaynaha yimaada halkaasi inta aanay u gudbin gagida ay diyaaraduhu ka duulaan.
Talaabadan ayay shirkaddu qaaday kadib markii codsi uu uga yimi mas’uuliyiinta Garoonka diyaaradaha ee Bander Qaasim, waxana ugu dambayn lagu guulaystay dhamaystirto dhismahan iyadoo si rasmi ah xariga looga jaray maanta oo ay taaiikhdu ku beegnayd 16/11/2014.
Munaasabadda xariga looga jaray dhismahan oo ka dhacday gudaha garoonka diyaaradaha Boosaaso oo ay goob jog ahaayeen masuuliyiinta shirkadda Golis iyo maamulka garoonka Bander Qaasim ayaa waxaa ugu horayn ka hadlay Dr Shaahid Faarax oo ah maareeye ku xigeenka garoonka Diyaaradaha Boosaso isagoo uga mahadceilyay Shirkadda Golis dhismahan oo uu sheegay in baahi wayn loo qabay.
“Dhismahan Golis ayaan ka codsanay waana noogu deeqday,runtii dhismuhu waa dhismo qiimo leh oo dhaxal gal ah,Shirkadaha kale waxaan leeyahay Golis waa inay ku daydaan’’ sidaas waxaa yiri Maareeye ku xigeenka Garoonka Diyaaradaha Bosaso.
Xasan Shire Amaan oo ah taliyaha ciidanka amniga Garoonka diyaaradaha Bosaso ayaa mahadcelin uu u jeediyay shirkadda Golis kadib bogaadiyay kaalinta muhiimka ah ee ay Golis ka qaadato arimaha bulshada taas oo uu xusay inay dadwaynuhu wada garawsan yihiin.
Dhinaca shirkadda Golis ayaa waxaa munaasabada ka hadlay Madaxa suuqgaynta shirkadda isgaarsiinta Golis C/raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax) isagoo sheegay in shirkadu ay mar walba garab taagantahay bulshada ayna maanta hirgalisay mid kamid ah adeegyadii ay bulshada ay horay ugu fulin jirtay.
“Shirkadda Golis iyada oo ka jawaabaysa baahida ay soo gudbiyeen Mas’uuliyiinta Garoonka Bandarqaasim ayay sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga jawaabtay,kharash iyo Waqti badana waa galeen,laakiin labadaas midna uma muuqdo,ee waxaa u muuqda in Mas’uuliyada ay qaaday ee ahayd inay Arrimaha Bulshada wax qabato’’Ayuu yiri C/raxmaan Dayax”.
Dhocda kale Shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom ayaa Internet xawaarihiisu sareeyo iyo Kaarar golis ah oo ay isticmaalaan ugu deeqday shirkadda ku hawlan dhismaha dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan (run way) ee uu yeelanayo garoonka Bander Qaasim ee lagu magacaabo China Civil Engineering Construction Corporation ‘’CCECC’.
Maareeyaha Mashruucan ee shirkadda “CCECC” Michael shin ayaa sheegay inay malamihii ugu dambeyay ee ay ku sugnaayeen dalka ay isticmaalayeen Internetka iyo adeegyada taleefan ee shirkadda Golis isagoo xusay inay ku faraxsanyihiin ayna uga mahadcelinayaan shirkadda Golis adeegyada heerka sarre ah ee ugu deeqeen.
C/Raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax) Madaxa suuqgaynta Shirkadda isgaarsiinta Golis ayaa dhankiisa sheegay in shirkadda “CCECC” ay ka haqabtirayaan baahi kasta oo isgaarsiin isagoo intaas ku daray in sidoo kale ay internet xawaarihiisu sareeyo oo lacag la’aan ah ay ku xiri doonaan garoonka diyaaradaha Boosaso iyo dhamaan garoomada kale ee Puntland si macaamiishu ay u isticmaalaan danohoodana ugu fulsadaan inta aan ay dhoofin.
Hawlahan oo shirkadda Golis Telecom ka qabatay garoonka diyaaradaha Boosaaso ee Bander Qaasim Airport ayaa qayb ka ah hindisayaasha shirkadda Golis ee ay had iyo jeer uga qayb qaadato arimaha bulshada.